Manana Hevitra Ho Zaraina Amin’ny Mpanohitra An’i Trump Ireto Venezoeliana Ireto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Febroary 2017 6:33 GMT
“Iraisan'izao tontolo izao ny fomba fanao. Mitadiava ratra iray iraisan'ny maro, olona iray hotsiniana noho izany ary tantara tsara iray ho tantaraina. Afangaroy daholo ireo rehetra ireo. Lazao amin'ireo naratra fa tsapanao ny mahazo azy ireo. Fa hitanao ny olon-dratsy.” Sary avy amin'ny Venezoeliana mpanao sariitatra, Eduardo Sanabria. Nahazoana alalana.
Tsy vao sambany no natao tamin'ny haino aman-jerim-bahoaka ny fampitahàna an'i Trump sy Chavez — efa nomarihan'ny olona ny fomba izay ianteheran'ireo mpitarika ireo amin'ny toetrany mba hampandroso ny tetikasa politikan'izy ireo — fa ankehitriny, rehefa lasa zava-misy ny fitondràn'i Donald J. Trump, ny sasany tamin'izay nanohitra ny filoha Venezoelana teo aloha Hugo Chavez sy ny rafitra noforoniny, dia miteny an-karihary amin'ireo manohitra ity vanim-potoana Trump vao teraka ity.
Caracas Chronicles, tranonkala iombonana iray natokana hanazavana ny toe-draharaha politika sarotra any Venezoela, dia nizara ny traikefa sy ny hevitry ny mpanoratra roa ao aminy. Samy nanana ny anjara fizaràna adihevitra ao amin'ny fanehoankevitra ireo lahatsoratra roa, miaraka amin'ny olona manaiky – sy tsy manaiky – azy ireo. Ao amin'ny lahatsoratra, hazavain'ny mpanoratra ny fomba izay ianteheran'ireo mpitarika amin'ny lazany mba hanaovany ny làlany, ny fomba nataon'ilay kalaza amin'ny kabary tsara lahatra ho lasa be fahavalo, ary ny fomba tokony hakàn'i Etazonia lesona avy amin'ny hadisoana izay inoan'izy ireo ho nataon'i Venezoela.
Ao amin'ny lahatsorany “Trump, Chavez sy ny firehan-kevitra manokana amin'ny fahaizana miseho an-tsehatra“, hadihadian'i Manuel Azuaje Álamo ny fomba nanohinan'i Trump sy Chavez ny olom-pirenena sy ny manampahaizana voakasik'izany, ary ny fomba nampiasan'izy ireo ny paikadin'ny fifandraisana izay tsy mbola fahita tany aloha. Ny maha-izy azy ireo — ary ny toe-tsaina izay noforonin'izy ireo ho azy — no tena tombony ho azy ireo:
Toa an'i Chávez, nanorina ny heriny taminà “firehan-kevitra manokana amin'ny fahaizana miseho an-tsehatra” i Trump, izay matetika manome toerana ny fihetsehampo , ary ny endrika isehoan‘ny hevitra. […] Ny hany hevitra tokana nivoahan'i Trump ho mpandresy dia Trump. Nahita izany ny Venezoeliana ary tsy afaka ny tsy hangorintsina. Nanasongadina ny tenany mihoatra ny zavatra rehetra koa i Chavez, na dia mihoatra noho ny lalàm-panorenana vaovao izay namboarin'izy tenany ho an'ny taona voalohany nandraisany ny fitondrana aza.
Niraisain'i Trump sy Chavez izany didoha mibahana an-tsaina ho an'ny fahaizana miseho an-tsehatra izany, ny fampisehoana sy ny fahefana — na, ny marina kokoa, ny jadona fampisehoana hery narahin'ireo fanapahankevitra jadona toy izany tsy hanaraka ireo volavolankevitra izay tsy hafa fa azy ireo ihany — izay ivon'ny fifandraisan'izy ireo sy ny mpanohana azy. Lasa olo-malazan'ny fahitalavitra i Chavez rehefa lasa filoha, i Trump dia lasa olo-malazan'ny fahitalavitra talohan‘ny naha filoha azy […] Isika eto Venezoela dia mahalala fa ampahany mafy ny hahataterahan'izany ao anatin'ny taona efatra, ny olona iray nifidy an'i Trump dia handinika ny fidinan'ny kalitaon'ny fiainany, ary hanome tsiny, tsy an'i Trump fa ny ‘ady ara-toekarena’ ifanaovana amin'i Shina na Meksika, ampian'ireo vato nasondrotry ny tany mpamadika any Washington sy ireo manampahaizana avy amin'ny hery ankavia, vonona foana ny hivarotra ny Tombontsoam-Pirenena.
Ity singa nasongadin'ny lahatsoratr'i Azuaje Álamo momba ny fananganana fahavalo ity koa dia teboka manan-danja ao anatin'ny lahatsoratr'i Andrés Miguel Rondón, “Ahoana no Hambolena Kolontsaina fandalàn'ny Vahoaka, ao anatin'ny Dingana Efatra Mora.” Ho an'ireo mpanoratra roa, iray amin'ireo tena tetika nampiasain'ireo mpitarika ireo ny famantarana fahavalo iray sy fanamboarana lahateny politika matanjaka avy amin'izay:
Iraisan'izao tontolo izao ny fomba fanao. Mitadiava ratra iray iraisan'ny maro, olona iray hotsiniana noho izany ary tantara tsara iray ho tantaraina. Afangaroy daholo ireo rehetra ireo. Lazao amin'ireo naratra fa tsapanao ny mahazo azy ireo. Fa hitanao ny olon-dratsy. Sokajio izy ireo: ny vitsy an'isa, ny mpanao politika, ny mpandraharaha. Ataovy sariitatra izy ireo. Toy ny bibikely, ratsy atidoha, bandikely matsatso, ianao no manome anarana azy. Avy eo lokoy ho toy ny mpamonjy ny tenanao. Sariho ny sainy. Adinoy ny momba ny politika sy ny drafitra, ampifalio aminà tantara tsara fotsiny izy ireo. Amin'ny voalohany hiantomboka amin'ny fahatezerana izany ary hiafara amin'ny valifaty. Valifaty izay ahafahan'izy ireo mandray anjara.
Ao anatin'ireo teboka efatra manaraka, tantarain'i Rondón ireo hadisoana inoany fa vitan'ny mpanohitra ny Chavismo tao Venezoela ary ny vokatra naterak'izy ireny. Ambarany fa ny paikady toy ireo izay nampiasain'i Chavez sy Trump dia miroborobo anatin'ny fifandroritana.
Lazain'i Rondón fa mamelona ireny fisarahana ireny ny fanehoana fankahalàna – zavatra izay, lazainy fa, maro ao anatin'ny hetsiky ny mpanohitra ao Venezoela no tsy mahita azy. Ho an'ny mpanoratra, mety hanaporofo loza ny paikady hanerena an'i Trump hiala amin'ny fahefana, ary hadihadiany ny raharahan'i Venezoela mba hanazavana ny heviny:
Tsotra ny fotokevitra fandaminanareo : aza mamoky fifandroritana, ampitoneo izany. Izany dia midika ho famelàna ho any ivoho ny sehatry ny fahalalampomba voaratra. Niady nandritra ny taona maro ny Venezoeliana mpanohitra mba hahazoana izany. Dia tsy hijanona ny hanome lesona momba ny maha-hadalana izany rehetra izany izy. Tsy vitan'ny hoe ny namany iraisam-pirenena ihany, fa ny fototry ny fifidianana Chavista mihitsy. [Raha manao izany ianao] Ho resy amin'ny ady voalohany ianao. Raha tokony hiady amin'ny fifandroritana, nilalao tao anatiny ianao. Amin'ity tranga ity, miezaha indray, tena marina, satria, amin'ny fomba rehetra […] Aza manandrana manery azy hiala.
Manazava bebe kokoa izy:
Efa nanandrana ny fika tsirairay avy amin'ilay boky ny mpanohitra eto amintsika. Fanonganam-panjakana? Jereo. Fitokonana momba ny menaka mandringana ? Jereo. Fiantsoana ny firotsahana an-tsehatry ny iraisam-pirenena? Nosaininao izany. Izany eo ihany, te-hahafantatra ny fomba nataony tamin'izay farany izay? Tamin'ny nialàny izy tenany tamin'ny lisi-pifidianana ho amin'ny fifidianana izay ho solombavam-bahoaka. Eny, nomen'izy ireo ny fahefana feno ao amin'ny Koangresy ny Chavismo ho toy ny karazana “fanambarana ara-diplomatika”. Mendrika eo anatrehan'Andriamanitra. […] Fa tsy nahomby isika. Satria efa nanadino [ny zava-misy] hoe tsy paikady ny hatezerana. Etsy andaniny, ny olona, ary ny tsy mainkina indrindra indrindra, dia hikomy aminao raha toa ianao mitady hiadaladala. Ny ratsy indrindra aza, dia ho porofoinao amin'ny tenanao fa ianao ihany ilay zavatra lazainao fa mila iadiana: fahavalon'ny demokrasia.
Tsy misy toerana ho an'ny fihatsarambelatsihy: lavitra ny làlana ao aloha ao, ary maro ny sakantsakana. […] Nefa raha te-ho anisan'ny vahaolana ianao, mazava ny làlana eo alohanao; Fantaro fa ianao ilay fahavalo ilain'izy ireo; ny asa saina aseho, fa tsy ny fifandroritana, ho an'ny ratran'ireo izay nitondra an'iTrump ho eo amin'ny fitondrana; amin'ny fomba rehetra, manàna faharetana amin'ny demokrasia, ary miadia mafy mba hanafaka ny tenanao amin'ny gadran'ny sariitatra nataon'ireo mpandremby vahoaka ho anao.
Adidy goavana izany. Nefa ratsy lavitra noho izany ny safidy tavela. Minoa ahy, fantatro izany: avy ao Venezoela aho.